UMasipala weTheku nendathane yamathuba omsebenzi￼ – SIVUBELAINTUTHUKO
UMasipala weTheku nendathane yamathuba omsebenzi￼
UZOQASHA abantu abalinganiselwa ku-10500 uMkhandlu weTheku oholwa yiMeya, uKhansela Mxolisi Kaunda. Lokhu lo Mkhandlu uzokwenza ngasekupheleni kwenyanga uMarch.
Lolu hlelo loMkhandlu kuvele ukuthi ulwenza ngenhloso yokudala amathuba omsebenzi kulabo bantu abangasebenzi.Kuhlaluke ukuthi lolu hlelo luzonikezwa ikakhulukazi abantu abasha baseThekwini namaphethelo.
Kuzokhumbuleka ukuthi ngaphambilini uKhansela Mxolisi Kaunda ukuchaze njengento emqoka kakhuku ukubaluleka kokudalwa kwamathuba omsebenzi ikakhulukazi kubantu abasha basedolobheni eThekwini.
Lolu hlelo olubonakala luzokwenza umehluko omkhulu kubantu baseThekwini kuvelile ukuthi seluphasisiwe ngokusemthethweni njengoba seluvele selugunyazwe yiKomidi eliphezulu elengamele ukusebenza kwalo Mkhandlu obalwa neminye yemikhulu eNingizimu Afrika yonkana.
UMkhandlu weTheku kuthiwa uzimisele ukusebenzisa imali eshisiwe elinganiselwa ku-R130 million ngenhloso yokuqhuba lolu hlelo oluhlabahlosile.
Lolu hlelo uMkhandlu weTheku uthi lungaphansi kwezinhlelo ezinqala zokuthuthukiswa kwezimpilo zabantu olumenyezelwe nguMengameli wezwe nyakenye, uMnuz Cryil Ramaphosa.
Kusukela ngomhlaka-01 kuMarch kuya ngomhlaka-06 enyangeni efanayo kuzoba noqeqesho oluzobe luhlose kakhulu ukulekelela labo bantu abasha abazobe sebekhethiwe ukuthi kube yibona ababa yingxenye yalolu hlelo.
Kuvelile ukuthi okwamanje lolu hlelo uMkhandlu weTheku uzolwenza lube yinkontileka yezinyanga ezinhlanu nje kuphela. Ngokuhamba kwesikhathi kuzobonakala ukuuthi lolu hlelo kungenzeka yini lubonakale luqhutshwa ngenhloso yokudala amathuba omsebenzi unomphelo.
IPhini leMeya kuMkhandlu weTheku, uMnuz Philani Mavundla uchaze lolu hlelo njengolubalulekile. Wagcizelela ukuthi kungaba yinto enhle uma kungase kuqinisekiswe ukuthi lubonakala lufinyelela nakulubo bantu abahlwempu ukuze bezokwazi ukuthi bondle imindeni yabo.
Kuvelile ukuthi abantu abazoqashwa kulolu hlelo bazobe besebenza kwiminyango eyehlukene ekhona ngaphakathi kuMkhandlu weTheku.
USomlomo waKwaZulu-Natal nekomidi elizoqapha umnikelo wezikhukhula
TSEPO MOTLOKOA IHHOVISI likaSomlomo wesiShayamthetho saKwaZulu-Natal uNksz Nontembeko Boyce seliqoke ikomidi lamalungu esishayamthetho elizojutshwa ezifundeni ezinhlanu ezikhahlanyezwe yizikhukhula ukubheka ukuthi ngabe uxhaso oludluliselwe kubantu luyafika yini kulabo abasale dengwane. Ngokwesitatimende esikhishelwe abezindaba yiHhovisi likaSomlomo uNksz Boyce kuvela ukuthi njengoba uMengameli waseNingizimu Afrika uMnu Cyril Ramaphosa ahlonza iKwaZulu-Natal njengesifundazwe esingena ngaphansi kwesenhlekelele kuneminikelo eminingi eyamukeliwe ukuzolekelela labo […]